Cabashada Huawei ee ku wajahan USA: Shiinaha waxay siisaa taageero buuxda - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA • International Shacabka Huawei oo ka soo horjeeda Maraykanka: Shiinaha waxay siisaa taageero buuxda
Cabashada Huawei ee ka soo horjeesey USA: Shiinaha waxay siisaa taageero buuxda
Eliseo Emma Kamgang 16 May 2019
Shiinaha ayaa Jimcihii siiyay taageero buuxda oo ay u fidiso dagaal dhinaca sharciga ah oo ay shirkadda Huawei ka soo horjeedo Maraykanka, isaga oo sheegay in ay qaadi doonaan "tallaabooyinka loo baahan yahay" si loo difaaco ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Huawei ayaa Khamiistii shaaca ka qaaday in dacwad lagu soo oogay Texas (koonfurta) ka soo horjeeda Washington si loo mamnuuco iibsashada alaabteeda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ammaanay dadaalka shirkadda, isaga oo sheegay in ayan aamusnayn sida "walaaca aamusnaanta" ee Mareykanka. Sida laga soo xigtay iyaga, qalabka kooxda ayaa loo isticmaali karaa Beijing si ay u basaasaan dalalka kale.
Maraykanka ayaa ka reebay Huawei isaga oo ka yimid Maraykanka ee 5G, oo ah jiilka shanaad ee shabakadaha guurguura, oo mamnuucaya iibsashada badeecadeeda iyo adeegyadeeda dawladaha. Waxay isku dayayaan inay ku qanciyaan xulafadooda reer galbeedka inay sameeyaan isla sidaas.
Maxkamad Maraykan ah ayaa sidoo kale waxay dooneysaa in ay isku daydo agaasimaha dhaqaalaha Shiinaha, Meng Wanzhou, in ay ku xad gudbeyso cunaqabateynta Iran. In lagu xakumo Kanada, waxay hadda ku jirtaa tijaabo, sugitaanka dacwad dhageysiga.
"Waa ku filan tahay in la helo ujeedo iyo dhexdhexaad ah si loo arko in tallaabooyinkii dhowaa ee ka dhanka ahaa shirkad iyo shakhsiyaad shakhsiyadeed oo Shiinuhu aysan ka koobnayn kiis maxkamadeed oo sahlan, laakiin cadaadis siyaasadeed oo qarsoodi ah," Wang ayaa sidaas yidhi Jimcihii.
"Waxaan qaadnay tallaabooyin kasta oo lagama maarmaan ah si aan u ilaalino xuquuqda iyo danaha ganacsiyada Shiinaha iyo muwaadiniinta," ayuu ku sheegay shir jaraa'id oo ku saabsan munaasabadda fadhiga xisbiyada sanadlaha ah.
Huawei ayaa Khamiistii shaaca ka qaaday in cabasho laga soo gudbiyay Texas (koonfurta) ka soo horjeeda Washington si uu u mamnuuco iibsashada alaabtiisa.
Shirkadda ayaa sidoo kale raadin doonta magdhow sababtoo ah xaddidaadyo, oo ay u aragto "dastuur", ayna ku eedeeyeen Maraykanka in ay jabiyeen server-yada iyo la soo xaday e-mail.
"Waxaan taageernaa shirkadaha iyo dadka ay khuseyso in ay isticmaalaan hub sharci ah si ay u ilaaliyaan xuquuqdooda iyo danahooda, si aysan u baraarugin," ayuu yiri Wang Yi.
Maamulka Trump ayaa sheegay in qalabka Huawei uu isticmaali karo Sirdoonka Shiinaha si uu u basaaso dalal kale isla markaana uu carqaladeeyo xidhiidhkooda.
Shiinuhu waxay rumaysan tahay in tani ay tahay marmarsiiyo looga hortagayo kor u qaadista shirkadda, hoggaamiyaha adduunka ee qalabka isgaadhsiinta, iyo ka fogaanshaha Maraykanka in ay tiknoolijiyad ahaan dib u dhacdo.
"Waxa aan dooneyno in aan difaacno maahan oo kaliya xuquuqda iyo danaha shirkad, laakiin sidoo kale xaqqa sharciga ah ee horumarinta wadan iyo waddan," ayuu yiri Wang.
Muuqaalka soo socda ee Meng Wanzhou oo qayb ka ah dacwad soo celinta ayaa la qaban doonaa May 8 ee Vancouver. Waxaa la xiray horaantii bishii December ee Canada, iyada oo codsiga Cadaalada Mareykanka.
Hannaankaas, laba Kanadiyaan ah ayaa lagu xiray dalka Shiinaha, kaas oo si wayn looga arko Galbeedka sidii anshax. Waxaa lagu tuhunsan yahay in ay halis geliyaan amniga qaranka.
Huawei ayaa bilowday olole saxaafadeed oo xooggan todobaadyadii dhawaa si uu u difaaco sumcaddiisa. Xitaa aasaasaha asaasiga ah Ren Zhengfei, 74, ayaa kor u qaaday taarikada, isaga oo beeniyay xidhiidh kasta oo la leh sirdoonka Shiinaha.
Hogaamiyeyaasha kooxda ayaa sidoo kale ku kulmay Khamiistii shir jaraa'id oo aan marnaba codsi ka helin Beijing si ay u rakibaan "backdoors" - guluubyadan qalabka ah oo ku basaasan karo isgaarsiinta.
Si kastaba ha ahaatee, sarkaalka sharciga ee Huawei Song Liuping, ayaa qiray, in sharciga Shiinuhu uu ku qasbi karo kooxda in ay gacan ka geystaan ​​dawladda, laakiin kaliya argagixisada ama hawlaha dambiyada.
Ka dib cabashada ka soo horjeeda Washington, shirkadda Shiinaha ayaa sheegtay Jimcihii in uunan qorsheyneynin in la soo oogo go'aanka Canberra si loo xakameeyo gelitaanka 5G ee Australia.
"Inkastoo aan kala duwanahay khilaafka dowladda federaalka ah, haddana waxaan door bideynaa inaan ka shaqeyno isaga", ayuu u sheegay AFP afhayeenka Huawei.
Qeybta Sahar-hoosaadka Afrika: By 2030, 230 Million Shaqooyin waxay Dalban doonaan Xirfadaha Dijital ah Sida laga soo xigtay IFC
Cameroon ayaa laga yaabaa inay ka lumiso bilyan Million oo Dollar FCFA sanadkiiba marka ay dhoofinayso boqortooyada Ingiriiska, iyada oo aan jirin wax heshiis ah ka dib markii Brexit (Unctad)